पैसा बचत गर्न सिक्न कसरी प्रश्न, पुरातन समयका देखि सान्दर्भिक छ। र यो यसको महत्त्व बढ्दै छ हरेक दिन जस्तो देखिन्छ।
वर्षौंदेखि, मूल्यहरु वर्षौंदेखि परिवर्तन गर्दा, यो सम्भव धेरै वर्ष को लागि आवश्यक राशि जम्मा गर्न थियो। आज, यो असम्भव छ: शुल्क मा स्थिर वृद्धि, मूल्यहरु मा वृद्धि एक वस्तु तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्न संभावना नदिई, सबै बचत "खान"।
त्यसैले के गर्न? कसरी पैसा बचत गर्न सिक्न, कुरा कसरी किन्ने, मान जो मासिक आय नाघ्यो?
यस को लागि यो सबै को पहिलो आफैलाई सँगै पुल आवश्यक छ। यसलाई आफ्नो सबै खर्च नियन्त्रण हुनेछ किनभने, र सायद पनि आफ्नो आवश्यकता परिवर्तन।
तपाईं प्रश्नको जवाफ अघि, पैसा बचत गर्न कसरी सिक्न, तपाईं छोटो एउटा सरल प्रश्न भन्दा कम गर्नुपर्छ, तर: "किन?"। तपाईं एक छिमेकीलाई भौतिक स्थिति पालन गर्न मात्र बचत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो छ जस्तै जीवन शैली कायम छ। तर यो अक्सर सम्भव छैन।
तर तपाईं "जीवन" ठूलो वस्तुहरूको खरिद वा बस लागि वित्त आवश्यक छ भने, त्यसपछि तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी पैसा बचत गर्न सिक्न? पहिले तपाईं कागज को पाना लिन र आवश्यक खर्च र तपाईं कि आय को सूची बनाउन आवश्यक छ। आवश्यक खर्च के हो? खाना, घरेलू रसायन, कस्मेटिक्स र औषधीको लागि पैसा। आफ्नो अधिग्रहण गर्न सक्दैन बिना। आफ्नो खरीद हुन सक्छ तर कम वित्त खर्च। पैसा कसरी सुरक्षित गर्न बुझ्न, तपाईँले नियमित प्रयोग गर्ने सामान गर्न एनोटेशन पढ्नुहोस्। पछि लाग्न छैन, के मिडिया मा विज्ञापन गरिएको छ। चार वा पाँच सय, वास्तविकता मा अत्यधिक पतला छ र स्वाद संरचना, पशु पसलहरुमा बेचिन्छ उदाहरणका लागि, स्याम्पु "अश्वशक्ति", लायक छ, कि जो तपाईंलाई थाहा छ? होइन, म त्यहाँ कस्मेटिक्स किन्न कल छैन, तर साधन विज्ञापन को रचनाहरूको र किराना पसलहरुमा बेचिन्छ ती तुलना गर्न, यो आवश्यक छ। सम्झना: अधिक वस्तु स्क्रिनमा निस्क्यो, अधिक यो लागत।
उपहार, मनोरञ्जन, शब्द सिफारिस एड खर्च को नै सूची, रंग exhaustively भविष्यका सबै खर्च। र त्यसपछि केही नियमहरू लीन।
अनिवार्य किन्न विशेष स्टोर, जहाँ यसलाई निरन्तर आयोजित छ बिक्री, छूट मा सबै भन्दा राम्रो हो। यो एक महिना एक पटक यस्तो उत्पादनहरु किन्न पर्याप्त छ, तपाईं मात्र तिनीहरूलाई राम्ररी प्रवाह गणना गर्नुपर्छ।
कसरी खाना पैसा बचत गर्न सिक्न? सबै को पहिलो, (यो लामो ज्ञात भएको), तपाईं भोक पसलमा जान सक्नुहुन्छ। उत्पादनहरु सूची अग्रिम हुनुपर्छ। समय मा तपाईं आत्मसंयम प्रयोग हुनेछ र यो के चाहन्थे अहिले किन्न छैन मलाई विश्वास। बस सामान को अघिल्लो श्रेणी जस्तै उत्पादनहरु ठूलो विशेषता पसलहरुमा किन्न राम्रो हो।
- पैसा को बर्बादी ostromodnye सामान: कसरी लुगा पैसा बचत गर्न कसरी सिक्न बुझ्न क्रममा, तपाईंले एक सच्चाइ सिक्न आवश्यक छ। तिनीहरूले धेरै महंगा र चाँडै फैशन बाहिर छन्। यसलाई उत्कृष्ट गुणस्तर केही क्लासिक वस्तुहरू किन्न राम्रो छ। तिनीहरूले एक भन्दा बढी सिजन पछिल्लो हुनेछ, तर तपाईं सस्ती फैशन सहायक तिनीहरूलाई पूरक गर्न सक्नुहुन्छ।
केही शब्दहरू अनलाइन किनमेल बारेमा भने गर्नुपर्छ। अक्सर, माल निर्माता को वेबसाइट मा खरिद, पसलमा भन्दा धेरै सस्ता छ।
अन्तमा, अर्को एक धेरै-आवश्यक क्षण। आफैलाई लागि निर्णय र तपाईं प्रति महिना बचत गर्न आवश्यक रकम लेख्न। बहाना आविष्कार छैन, यसलाई लीन। गाह्रो छ: तपाईं सधैं फेरि एउटा चलचित्र जाने वा किन्न चाहनु शैम्पेन को बोतल अधिक महंगा। छनौट: अब वा भविष्यमा लाभ आनन्द।
सम्झना: तपाईं निर्णय तपाईंले रकम जम्मा गर्न सक्षम हुनेछ कि, वा फेरि गर्भवती भइन् छ "रोक्नुहोस्" छिमेकी देखि यात्रा गर्न पैसा।
आफैलाई सीमित, योजना, विचार - र तपाईंले गुणात्मक जीवित आफ्नो मानक सुधार गर्न सक्षम हुनेछ।
जहाँ प्राप्त एक ऋण अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित गर्न?
कसरी खाना पैसा बचत गर्न
को चेल्याबिन्स्क क्षेत्रको खनिज संसाधन: सूची
काठ दिन को शवर बनाउन को लागि